၁ ဇွန် - ဝီကီပီးဒီးယား
ဇွန်လ၊ (၁)ရက်နေ့ သည် ဂရီဂေါရီးယန်းပြက္ခဒိန်အရ တစ်နှစ်တာ၏ (၁၅၂)ရက်မြောက် (ရက်ထပ်နှစ်ဖြစ်လျှင် (၁၅၃)ရက်မြောက်) နေ့ရက် ဖြစ်သည်။ ယင်းတစ်နှစ်တာ ကုန်ဆုံးရန် ရက်ပေါင်း (၂၁၃) ရက် ကျန်သေးသည်။
၂.၁ ၁၆၀၀ ခုနှစ် အထိ
၂.၂ ၁၆၀၁ ခုနှစ်မှ ၁၉၀၀ ခုနှစ်ထိ
၂.၃ ၁၉၀၁ ခုနှစ်မှ ယနေ့ထိ
၃.၁ ၁၆၀၀ ခုနှစ် မတိုင်မီ
၃.၂ ၁၆၀၁ ခုနှစ်မှ ၁၉၀၀ ခုနှစ်ထိ
၃.၃ ၁၉၀၁ ခုနှစ်မှ ယနေ့ထိ
၁၂၁၅ – ဂျာချန်းလူမျိုးတို့၏ ကျင်းဧကရာဇ် ရှန်ကျုံး၏ လက်အောက်၌ရှိသော ကျုံဒူးမြို့ (ယခုဘေဂျင်းမြို့)သည် ဂျင်ဂစ်ခန်လက်အောက်ရှိ မွန်ဂိုတို့၏ သိမ်းပိုက်မှုကို ခံခဲရပြီး ကျုံဒူးတိုက်ပွဲအား အဆုံးသတ်စေခဲ့သည်။
၁၂၅၂ – အာဖွန်ဆို ၁၀ အား ကာစတီးလ်နှင့် လီယွန်ဘုရင့်နိုင်ငံတော်တို့၏ ဘုရင်အဖြစ် ကြေငြာခဲ့သည်။
၁၂၉၈ – ရီဂါမြို့တွင် နေထိုင်ကြသူများနှင့် လစ်သူယေးနီးယားနယ်စားကြီးတို့သည် တူရာအီဒါတိုက်ပွဲတွင် လီဗိုနီယန်အဖွဲ့အား ရှုံးနိမ့်စေခဲ့သည်။
၁၄၉၅ – ဘုန်းတော်ကြီးတစ်ပါးဖြစ်သော ဂျွန်ကောသည် စကောဝီစကီဟု လူသိများလာမည့် ဝီစကီ၏ ပထမဆုံးသော ထုတ်လုပ်မှုကို မှတ်တမ်းတင်ခဲ့သည်။
၁၅၃၃ – အန်း ဘိုလင်းသည် အင်္ဂလန်နိုင်ငံ၏ ဘုရင်မကြီးအဖြစ် ဘိသိတ်ခံခဲ့သည်။
၁၅၃၅ – ပဉ္ဇမမြောက် ချားလ်ဘုရင်အား သစ္စာခံသော တပ်ပေါင်းစုသည် တူနစ်မြို့အား အောင်နိုင်ခဲ့ပြီး အော်တိုမန်တို့အား တူနစ်မြို့မှ မောင်းထုတ်နိုင်ခဲ့သည်။
၁၆၀၁ ခုနှစ်မှ ၁၉၀၀ ခုနှစ်ထိပြင်ဆင်
၁၆၄၈ – ဒုတိယ အင်္ဂလိပ်ပြည်တွင်းစစ်အတွင်း Roundheadတို့သည် မိတ်စတုန်းမြို့တိုက်ပွဲတွင် Cavalierတို့အား ရှုံးနိမ့်စေခဲ့သည်။
၁၆၄၉ – ဆူမူရိုင်းပုန်ကန်မှုစတင်ခြင်း: ဩဂတ်စတင်း ဆူမူရိုင်းဦးဆောင်သော မြောက်ပိုင်းဆာမားပြည်နယ်မှ ဖိလစ်ပိုင်လူမျိုးတို့သည် စပိန်ကိုလိုနီအာဏာပိုင်တို့အား တော်လှန်ပုန်ကန်ခဲ့သည်။
၁၆၇၀ – အင်္ဂလန်နိုင်ငံ၊ ဒိုဗာမြို့တွင် အင်္ဂလန်ဘုရင် ချားလ်စ် ၂ နှင့် ပြင်သစ်ဘုရင် လူဝီ ၁၄ တို့သည် ဒိုဗာ လျှို့ဝှက်သဘောတူစာချုပ်အား ချုပ်ဆိုခဲ့ပြီး တတိယမြောက် အင်္ဂလိပ်-ဒတ်ချ်စစ်ပွဲတွင်းသို့ အင်္ဂလန်အား ဝင်ရောက်စေခဲ့သည်။
၁၆၇၆ – အော်လန်ကျွန်းတိုက်ပွဲ: ဒိန်းမတ်နှင့် ဒတ်ချ် မဟာမိတ်တပ်ဖွဲ့သည် စကေးနီးယန်းတိုက်ပွဲ(၁၆၇၅-၇၉)အတွင်း ဘောလ်တစ် ပင်လယ်တွင် ဆွီဒင်ရေတပ်အား ရှုံးနိမ့်စေခဲ့သည်။
၁၆၇၉ – စကော့ Covenanterတို့သည် ဒရမ်ကလော့ဂ်တိုက်ပွဲတွင် ဂျွန် ဂရေဟမ်အား ရှုံးနိမ့်စေခဲ့သည်။
၁၇၇၃ – ဂွတ်ဟုဒ်အငူတွင် ဝေါ့ရက်ဒ် ဝေါ့တီမိတ်သည် De Jonge Thomas သင်္ဘောနစ်မြုပ်ရာတွင် သင်္ဘောသား ၁၄ ဦးကို သူ့မြင်းအားစီး၍ ပင်လယ်ထဲသို့ ခုနှစ်ကြိမ်တိုင်တိုင်ဆင်းပြီး ကယ်တင်ခဲ့သည်။ ၈ ကြိမ်မြောက်ကယ်တင်ရန် ကြိုးစားရာတွင် ရေနစ်သေဆုံးခဲ့သည်။
၁၇၇၉ – အမေရိကန်တော်လှန်ရေးစစ်ပွဲအတွင်း တိုက်ကြီးစစ်တပ်မှ စစ်ဦးစီး ဗိုလ်ချုပ် ဘီနီဒစ် အာနိုး၏ လွဲမှားစွာဆောင်ရွက်မှုအတွက် စစ်ခုံရုံးအား စတင်စစ်ဆေးခဲ့သည်။
၁၇၉၂ – ကင်တပ်ကီပြည်နယ်အား အမေရိကန်ပြည်ထောင်စု၏ ၁၅ ခုမြောက်ပြည်နယ်အဖြစ် ဝင်ရောက်ခွင့်ပြုခဲ့သည်။
၁၇၉၄ – ပြင်သစ်တော်လှန်ရေးစစ်ပွဲများအတွင်း ဗြိတိန်နှင့် ပြင်သစ်တို့၏ ရေတပ်များ ပထမဆုံးအကြိမ်ထိတွေ့မှုဖြစ်သည့် ဇွန်လ၏ ကောင်းမြတ်သော ပထမဆုံးနေ့တိုက်ပွဲကို ဆင်နွှဲခဲ့သည်။
၁၇၉၆ – တင်နက်ဆီပြည်နယ်အား အမေရိကန်ပြည်ထောင်စု၏ ၁၆ ခုမြောက်ပြည်နယ်အဖြစ် ဝင်ရောက်ခွင့်ပြုခဲ့သည်။
၁၈၁၂ – ၁၈၁၂ စစ်ပွဲ: အမေရိကန်သမ္မတ ဂျိမ်းစ် မဒီဆင် သည် ကွန်ဂရက်အား ယူနိုက်တက်ကင်းဒမ်းအား စစ်ကြေငြာရန် တောင်းဆိုခဲ့သည်။
၁၈၁၃ – အမေရိကန် ဖရီးဂိတ် စစ်သင်္ဘော ယူအက်အက် ချက်ဆာပီခ်အား ယူနိုက်တက်ကင်းဒမ်း၏ ဖရီးဂိတ် စစ်သင်္ဘောဖြစ်သော အိတ်ချ်အမ်အက် ရှန်နွန်မှ သိမ်းပိုက်ခဲ့သည်။
၁၈၁၅ – လူထုဆန္ဒခံယူပွဲပြုလုပ်ပြီးနောက် နပိုလီယန်သည် ပြင်ဆင်သည့် ဖွဲ့စည်းပုံ အခြေခံဥပဒေကို ပြဋ္ဌာန်းခဲ့သည်။
၁၈၃၁ – ဂျိမ်း ကလာ့ခ် ရို့စ်သည် မြောက်ကမ္ဘာခြမ်း သံလိုက်ဝန်ရိုးစွန်းသို့ ရောက်ရှိခဲ့သော ပထမဆုံး ဥရောပတိုက်သား ဖြစ်လာခဲ့သည်။
၁၈၄၉ – နယ်မြေဘုရင်ခံ အလက်ဇန္ဒား ရမ်ဆေးသည် မင်နီဆိုတားနယ်မြေကို တည်ထောင်ခဲ့သည်။
၁၈၅၅ – အမေရိကန် စွန့်စားရှာဖွေသူ ဝီလီယံ ‌ဝေါ်ကာသည် နီကာရာဂွါနိုင်ငံအား အောင်နိုင်ခဲ့သည်။
၁၈၅၇ – ချား ဘူဒီလဲ၏ Les Fleurs du mal ကို ထုတ်ဝေခဲ့သည်။
၁၈၆၁ – အမေရိကန် ပြည်တွင်းစစ်: ဖဲယားဖက် ဒေသန္တရာအုပ်ချုပ်ရေးရုံးတိုက်ပွဲ ဖြစ်ပွားခဲ့သည်။
၁၈၆၂ – အမေရိကန် ပြည်တွင်းစစ်: ကျွန်းဆွယ်တိုက်ပွဲစဉ်: ထင်းရှူးခုနှစ်ပင်တိုက်ပွဲ (သို့မဟုတ် ဖဲယားအုတ်ခ်တိုက်ပွဲ)သည် ရှင်းလင်းပြတ်သားမှုမရှိပဲ ပြီးဆုံးခဲ့ပြီး နှစ်ဘက်လုံးမှ အနိုင်ရသည်ဟု ကြေငြာခဲ့သည်။
၁၈၆၈ – ဘော့စ်ကွပ် ရီဒန်ဒိုစာချုပ်အား လက်မှတ်ရေးထိုးခဲ့ပြီးနောက် န‌ဗာဟိုလူမျိုးစုများကို အရီဇိုးနားနှင့် နယူးမက္ကဆီကိုရှိ ၎င်းတို့၏ နယ်မြေများဆီသို့ ပြန်လာခွင့်ပြုခဲ့သည်။
၁၈၇၉ – ဘိုနာပတ် အိမ်တော်၏ နောက်ဆုံးသော နန်းမွေဖြစ်သော နပိုလီယံ ယူဂျင်းသည် အင်္ဂလိပ်-ဇူးလူးစစ်ပွဲတွင် အသတ်ခံခဲ့ရသည်။
၁၈၉၀ – အမေရိကန်ပြည်ထောင်စု သန်းခေါင်စာရင်းဌာနသည် သန်းခေါင်စာရင်းပြန်လည်ကောတ်ခံရာတွင် ‌ဟာမန်း ဟော်လာရစ်၏ ဇယားဆွဲစက်အား အသုံးပြုပြီး ဆောင်ရွက်ခဲ့သည်။
၁၉၀၁ ခုနှစ်မှ ယနေ့ထိပြင်ဆင်
၁၉၁၃ – ဒုတိယမြောက် ဘူလ်ကန်စစ်ပွဲအား ပြင်ဆင်သည့်အနေဖြင့် ဂရိ-ဆားဘီးယား မဟာမိတ်စာချုပ်ကို လက်မှတ်ထိုးခဲ့သည်။
၁၉၁၆ – လူဝစ် ဘရန်ဒိုင်းသည် အမေရိကန်ပြည်ထောင်စု တရားရုံးချုပ်တွင် ခန့်ထားခြင်းခံရသော ပထမဆုံးသော ဂျူးလူမျိုးဖြစ်လာခဲ့သည်။
၁၉၁၈ – ပထမ ကမ္ဘာစစ်: အနောက်ဖက်စစ်မျက်နှာ: ဘဲလားသစ်တောတိုက်ပွဲ: ဂျွန် ပါ့ရှင်း နှင့် ဂျွန် ဟာ့ဘုတ်တို့ ဦးဆောင်သော မဟာမိတ်တပ်များသည် အိမ်ရှေ့မင်းသား ဝီလ်ဟမ် ဦးဆောင်သည့် ဂျာမန်အင်ပါယာတပ်များနှင့် ထိတွေ့တိုက်ပွဲဖြစ်ခဲ့သည်။
၁၉၁၉ – ဖင်လန်နိုင်ငံတွင် အရက်ယာမကာချက်လုပ်ရောင်းချမှုအား တားမြစ်ခြင်းကို ပြဋ္ဌာန်းခဲ့သည်။
၁၉၂၂ – မြောက်အိုင်ယာလန်တွင် အယ်လ်စတာ နယ်မြေခံ တော်ဝင်ရဲတပ်ဖွဲအား ဖွဲ့စည်းတည်ထောင်ခဲ့သည်။
၁၉၂၉ – လက်တင်အမေရိကရှိ ကွန်မြူနစ်ပါတီများ၏ ပထမဆုံးအကြိမ် ညီလာခံကို ဗျူနိုအေးရိစ်မြို့၌ ကျင်းပခဲ့သည်။
၁၉၃၀ – Bombay VT (ယခု Mumbai CST) နှင့် Poona (Pune) ကြား ‌ပြေးဆွဲသည့် လျှပ်စစ်စက်ခေါင်းတပ် ဒက်ကန်းဘုရင်မမီးရထားကို စတင်ပြေးဆွဲခဲ့သည်။
၁၉၃၉ – ဂျာမန် Focke-Wulf Fw 190 တိုက်လေယာဉ်၏ ပထမဆုံးသော ပျံသန်းမှုပြုလုပ်ခဲ့သည်။
၁၉၄၁ – ဒုတိယ ကမ္ဘာစစ်: ခရိကျွန်းတိုက်ပွဲပြီးဆုံးခဲ့ပြီး ခရိတို့သည် ဂျာမနီထံ လက်နက်ချအရှုံးပေးခဲ့သည်။
၁၉၄၁ – အီရတ်တွင် ဖားဟုဒ် ဟုခေါ်သော စီမံကိန်းကြီးစတင်ခဲ့ပြီး ရလဒ်အနေဖြင့် များစွာသော အီရတ်ဂျူးများသည် ၎င်းတို့၏နေရပ်မှ စွန့်ခွာရန် ဖိအားပေးခြင်းခံခဲ့ရသည်။
၁၉၄၃ – ဘစ်ကေးပင်လယ်အော်တွင် BOAC Flight 777 လေယာဉ်သည် ဂျာမန် Junkers Ju 88 လေယာဉ်များဖြင့် ပစ်ချခြင်းခံခဲ့ရပြီး ဗြိတိသျှရုပ်ရှင်မင်းသား လ‌က်စီ ဟောက်ဝပ်သေဆုံးခဲ့ပြီး ထင်မြင်ချက်များအရ အမှန်တကယ်မှာ ဗြိတိသျှဝန်ကြီးချုပ်rဖြစ်သော ဝင်စတန် ချာချီအား သတ်ရန်ကြိုးစားခြင်းဖြစ်သည်ဟု ဆိုကြသည်။
၁၉၄၆ – ရိုမေးနီးယား "တေးဂီတအဖွဲ့ခေါင်းဆောင်" အီယွန် အန်သွန်နက်စကျူ သည် ဒုတိယကမ္ဘာစစ်အတွင်း ကွပ်မျက်ခံခဲ့ရသည်။
၁၉၅၀ – ချင်ချဂါတောမီးလောင်ကျွမ်းမှု စတင်ခဲ့ပြီး စက်တင်ဘာလအရောက်တွင် မြောက်အမေရိကတိုက်သမိုင်း၌ အကြီးဆုံးသော တစ်ခုတည်းသော တောမီးလောင်ကျွမ်းမှုဖြစ်လာခဲ့သည်။
၁၉၅၈ – ချားလ် ဒီ ဂူးလပ်သည် အငြိမ်းစားဘဝမှထွက်လာခဲ့ပြီး ဥပဒေဖြင့် ပြင်သစ်နိုင်ငံအား ၆ လ ဦးဆောင်ခဲ့သည်။
၁၉၆၁ – ကနေဒါ စီးပွားရေးဘဏ်နှင့် ကနေဒါ အင်ပါယာဘဏ်တို့အား ပေါင်းစပ်ပြီး စီးပွားရေးဆိုင်ရာ ကနေဒါ အင်ပါယာဘဏ်အား ဖွဲ့စည်းခဲ့ပြီး ကနေဒါသမိုင်းတွင် အကြီးမားဆုံးသော ဘဏ်ပေါင်းစပ်ုဖြစ်သည်။
၁၉၆၂ – အဒေါ့ဖ် အိုက်ခမန်းအား အစ္စရေးနိုင်ငံတွင် ကြိုးမိန့်ပေးခဲ့သည်။
၁၉၆၄ – ကင်ညာနိုင်ငံသည် သမ္မတနိုင်ငံဖြစ်လာခဲ့ပြီး ဂျိုမို ကင်ညာတာ(၁၈၉၇ – ၂၂ ဩဂုတ် ၁၉၇၈)သည် ပထမဆုံးသော သမ္မတ(၁၉၆၄ မှ ၁၉၇၈) ဖြစ်လာခဲ့သည်။
၁၉၇၄ – အသက်ရှူကြပ်နေသော လူနာအား အရေးပေါ်ကယ်ဆယ်နည်း(Heimlich maneuver)အား Emergency Medicine ဂျာနယ်တွင် ဖော်ပြခဲ့သည်။
၁၉၇၅ – Patriotic Union of Kurdistan ပါတီကို ဂျာလာ တလာဘနီ၊ နော်ရှီဝမ် မူစတက်ဖာ၊ ဖူအက် မာဆွန်နှင့် အခြားသူများ စုပေါင်းတည်ထောင်ခဲ့သည်။
၁၉၇၈ – မူပိုင်ခွင့်ဆိုင်ရာ ပူးပေါင်းဆောင်ရွက်ရေး သဘောတူစာချုပ်အောက်တွင် ပထမဆုံးသော နိုင်ငံတကာ အသုံးချမှုများအား ပြုလုပ်ခဲ့သည်။
၁၉၇၉ – နှစ် ၉၀ အတွင်း လူမဲများဦးဆောင်သော အစိုးရသည် ရိုဒီးရှား (ယခု ဇင်ဘာဘွေနိုင်ငံ)၏ အာဏာကို ရယူနိုင်ခဲ့သည်။
၁၉၈၀ – Cable News Network (CNN) အား စတင်ထုတ်လွှင့်ခဲ့သည်။
၁၉၈၈ – ဘရပ်ဆဲလ်မြို့တွင် ဥရောပ ဗဟိုဘဏ်အား တည်ထောင်ခဲ့သည်။
၁၉၈၈ – အလယ်အလတ်ပစ် နျူးကလီးယားတပ်ဖွဲ့ဆိုင်ရာ စာချုပ် အသက်ဝင်ခဲ့သည်။
၁၉၉၀ – စစ်အေးတိုက်ပွဲ: ဂျော့ချ် ဟားဘတ် ဝေါလ်ကာ ဘုရှ်နှင့် မစ်ခေး ‌ဂေါ်ဗာချော့ဗ်တို့သည် ဓာတုလက်နက်များထုတ်လုပ်ခြင်းအား ရပ်ဆိုင်းရန် သဘောတူစာချုပ်အား ချုပ်ဆိုခဲ့သည်။
၁၉၉၃ – ဒိုဘရင်ဂျာ စိန်ပြောင်းပစ်ခတ်မှု: ဆာရာယေဗိုမြို့အနောက်ပိုင်းရှိ ဒိုဘရင်ဂျာရပ်ကွက်တွင် ကျင်းပနေသော ဘောလုံးပွဲအတွင်းသို့ ပစ်ခတ်ခဲ့ရာ ၁၃ ဦးသေဆုံးပြီး ၁၃၃ ဦး ဒဏ်ရာရရှိခဲ့သည်။
၁၉၉၄ – တောင်အာဖရိကသမ္မတနိုင်ငံသည် ဓနဿဟာယသမ္မတနိုင်ငံတစ်ခု ဖြစ်၍လာခဲ့သည်။
၁၉၉၉ – American Airlines Flight 1420 သည် လစ်တဲယ်ရော့ခ်အမျိုးသားလေဆိပ်တွင် ဆင်းသတ်စဉ် ချော်၍ ပျက်ကျခဲ့ရာ ဒါးလတ်စ်မြို့ မှ လစ်တဲယ်ရော့ခ်မြို့သို့ သွားသော ခရီးသည် ၁၁ ဦး သေဆုံးခဲ့သည်။
၂၀၀၁ – နေပါလီတော်ဝင်မိသားစု သတ်ဖြတ်ခံရမှု: အိမ်ရှေ့စံ ဒီပင်္ဒရာမင်းသားသည် ခမည်းတော်နှင့်မယ်တော်အပါအဝင် သူ့မိသားစုထဲမှ များစွာသော သူတို့အား ပစ်ခတ်သတ်ဖြတ်ခဲ့သည်။
၂၀၀၁ – Dolphinarium discotheque massacre: တဲအဗစ်မြို့ရှိ ဒစ္စကိုကလပ်တွင် ဟားမတ်တို့သည် အသေခံဗုံးခဲ့ရာ ၂၁ ဦး သေဆုံးခဲ့သည်။
၂၀၀၄ – အိုကလာဟိုမားမြို့ ဗုံးပေါက်ကွဲမှုတွင် ပူးပေါင်းကြံစည်သူ တယ်ရီ နီကိုလပ်ကို ခံဝန်ချက်မရှိပဲ သက်တမ်းတစ်လျှောက် ၁၆၁ နှစ်ပြစ်ဒဏ်ကျခံစေရာဂင်းနက် ကမ္ဘာ့စံချိန်ဝင်ခဲ့သည်။
၂၀၀၈ – ယူနီဗာဆယ်စတူဒီယိုမီးလောင်မှု ရုတ်တရပ်ဖြစ်ပွားခဲ့ပြီး King Kong Encounter နှင့် ရုပ်ရှင်၊ ဂီတတို့အတွက် မာစတာတိတ်ခွေများသိမ်းဆည်းမှုတို့လည်း ပျက်စီးသွားခဲ့သည်။
၂၀၀၉ – ရီယိုဒီဂျနေးရိုးမြို့မှ ပဲရစ်မြို့သို့ ပျံသန်းလာသော Air France Flight 447 သည် ဘရာဇီးကမ်းရိုးတန်းအလွန် အတ္တလန်တစ်သမုဒ္ဒရာအတွင်းသို့ ပျက်ကျကာ ခရီးသည် ၂၂၈ ဦးလုံးနှင့် လေယာဉ်ဝန်ထမ်းများ အားလုံး အသက်ဆုံးရှုံးခဲ့ရသည်။
၂၀၀၉ – General Motorsအား အခန်း (၁၁) ဒေဝါလီခံခြင်းအတွက် တရားစွဲဆိုခြင်းခံခဲ့ရသည်။ ဤသည်မှာ အမေရိကန်သမိုင်း၌ စတုတ္ထမြောက်အကြီးဆုံး ဒေဝါလီခံခြင်းဖြစ်သည်။
၂၀၁၁ – နယူးအင်္ဂလန်တွင် ရှားပါးစွာ ‌ဖြစ်ပွားသော လေဆင်နှာမောင်းတိုက်ခတ်မှုဖြစ်ပွားပြီး မန်ဆာချူးဆက်ပြည်နယ်၊ စပရင်းဖီးမြို့ကို တိုက်ခတ်ခဲ့ရာ လူ ၄ ဦးသေဆုံးခဲ့သည်။
၂၀၁၁ – Space Shuttle Endeavour သည် ၂၅ ကြိမ် ပျံသန်းမှုပြုလုပ်ခဲ့ပြီးနောက် နောက်ဆုံးအကြိမ် ဆင်းသတ်ခဲ့ခြင်း ပြုလုပ်ခဲ့သည်။
၂၀၁၅ – တရုတ်နိုင်ငံ၊ ဟူပေပြည်နယ်တွင် အတွင်းသွားနေသော ၄၅၈ ဦးစီးနင်းခဲ့သော သင်္ဘောသည် ယန်ဇီမြစ်အတွင်း နစ်မြုပ်ခဲ့ရာ လူ ၄၀၀ ဦး သေဆုံးခဲ့သည်။
၁၆၀၀ ခုနှစ် အထိပြင်ဆင်
၁၁၃၄ – ‌ဂျော့ဖရေး (နော့ထ်မြို့စား (၁၁၅၈ ခုနှစ် သေဆုံး))
၁၃၀၀ – သောမတ် (ပထမမြောက် နော့ဖို့ခ်မြို့စား၊ အင်္ဂလိပ်နိုင်ငံရေးသမား၊ အင်္ဂလန်နိုင်ငံ စစ်သေနာပတိချုပ် (၁၃၃၈ ခုနှစ် သေဆုံး)
၁၄၅၁ – ဂျိုင်ရယ် ဒါဘီနီ (ပထမမြောက် ဒါဘီနီဘယ်ရွန်) (၁၅၀၈ ခုနှစ် သေဆုံး)) 
၁၄၆၀ – ပထမမြောက် အန်နို (အရှေ့ဖရီရှားနယ်စား၊ ဂျာမန်တော်ဝင်မျိုးနွယ် (၁၄၉၁ ခုနှစ် သေဆုံး))
၁၄၈၀ – တီဒီမင် ဂီဆီ (ပိုလန် ဘုန်းတော်ကြီး (၁၅၅၀ ခုနှစ် သေဆုံး))
၁၄၉၈ – မာတင် ဗန် ဟိမ်းစကား (ဒတ်ချ် ပန်းချီဆရာ (၁၅၇၄ ခုနှစ် သေဆုံး))
၁၅၂၂ – ဒီရစ် ဗော့လ်ခါဇုန် ကိုရင်ဟတ် (ဒတ်ချ် စာရေးဆရာနှင့် ပညာရှင် (၁၅၉၀ ခုနှစ် သေဆုံး))
၁၅၆၃ – ရောဘတ် စီဆယ် (ပထမမြောက် ဆောလ်ဇ်ဘယ်ရီအမတ်ကြီး၊ အင်္ဂလိပ်နိုင်ငံရေးသမား၊ Secretary of State for England (၁၆၁၂ ခုနှစ် သေဆုံး))
၁၆၁၂ – ဖရန့်စ် ပို့စ်ထ် (ဒတ်ချ် ပန်းချီဆရာ (၁၆၈၀ ခုနှစ်သေဆုံး)
၁၆၃၃ – ဂျင်မီနီယာနို မွန်တာနာရီ (အီတလီ နက္ခတ္တဗေဒပညာရှင် (၁၆၈၇ သေဆုံး))
၁၆၃၇ – ဂျက် မာကတ် (ပြင်သစ် သာသနာပြုနှင့် နယ်မြေသစ်ရှာဖွေသူ (၁၆၇၅ သေဆုံး))
၁၆၅၃ – ဂျော့ မာဖက် (ပြင်သစ် အော်ဂင်ဆရာနှင့် တေးပြုစာဆို (၁၇၀၄ ခုနှစ် သေဆုံး))
၁၆၇၅ – ဖရန်ချီစကို ဆီပီရိုနီ (အီတလီ ဗိသုကာပညာရှင်နှင့် ပြဇာတ်ရေးဆရာ (၁၇၅၅ ခုနှစ် သေဆုံး))
၁၇၆၂ – အက်မန့် အစ်ဂနေးရှပ်စ် ရိုက်စ် (အိုင်းရစ် ဘုန်းတော်ကြီးနှင့် Irish Christian Brothers တည်ထောင်သူ သာသနာပြု (၁၈၄၄ ခုနှစ် သေဆုံး))
၁၇၆၅ – ခရစ္စတီးယန် ဗာပီးယပ်စ် (ဂျိုဟန် ဝုဖဂန် ဖွန် ဂါတာ၏ ဇနီး (၁၈၁၆ ခုနှစ် သေဆုံး))
၁၇၇၀ – ဖရီဒရစ် လန်းန် (ဂျာမန် စာရေးဆရာ (၁၈၄၉ ခုနှစ် သေဆုံး))
၁၇၉၀ – ဖာဒီနန် ရိုင်မွန့် (ဩစတီးယား သရုပ်ဆောင်နှင့် ပြဇာတ်ရေးဆရာ (၁၈၃၆ ခုနှစ် သေဆုံး))
၁၇၉၆ – နီကိုလပ် လီယွန်နာ့ဒ် ဆန်ဂျီ ကာနော့ထ် (ပြင်သစ် ရူပဗေဒပညာရှင်နှင့် အင်ဂျင်နီယာ (၁၈၃၂ ခုနှစ် သေဆုံး))
၁၈၀၀ – အက်ဒွပ် ဒီးစ် သွန်မဆင် (ဩစတေးလျ ကျောင်းဆရာနှင့် နိုင်ငံရေးသမား၊ နယူးဆောက်သ်ဝေးလ်ပြည်နယ်၏ အတွင်းရေးမှူးချုပ် (၁၈၇၉ ခုနှစ် သေဆုံး))
၁၈၀၁ – ဘရစ်ဂန် ယန်း (အမေရိကန် ဘာသာရေးခေါင်းဆောင်၊ ဒုတိယမြောက် Jesus Christ of Latter-day Saints ဘုရား‌ကျောင်းတော်၏ အကြီးမှူး (၁၈၇၇ ခုနှစ် သေဆုံး))
၁၈၀၄ – မီခါဟီးလ် ဂလင်ကာ (ရုရှား တေးပြုစာဆို (၁၈၅၇ ခုနှစ် သေဆုံး))
၁၈၀၈ – ဟင်နရီ ပါကာ (အင်္ဂလိပ်-ဩစတေးလျ နိုင်ငံရေးသမား၊ တတိယမြောက် နယူးဆောက်သ်ဝေးပြည်နယ် ဝန်ကြီးချုပ် (၁၈၈၁ ခုနှစ် သေဆုံး)
၁၈၁၅ – အော်တို (၁၈၆၂ ခုနှစ် သေဆုံး)
၁၈၁၉ – ပဉ္စမမြောက် ဖရန်စစ် (၁၈၇၅ ခုနှစ် သေဆုံး)
၁၈၂၂ – ကလယ်မန်တီနာ မာ့ဒ် (ဟာဝါဒန် ဗိုင်းကောင့်၊ အင်္ဂလိပ် ပုံတူဓာတ်ပုံဆရာ (၁၈၆၅ ခုနှစ် သေဆုံး))
၁၈၂၅ – ဂျွန် ဟန့်ထ် မော်ဂန် (အမေရိကန် ဗိုလ်ချုပ် (၁၈၆၄ ခုနှစ် သေဆုံး)) 
၁၈၃၁ – ဂျွန် ဘဲလ် ဟုဒ် (အမေရိကန် ဗိုလ်ချုပ် (၁၈၇၉ ခုနှစ် သေဆုံး))
၁၈၃၃ – ဂျွန် မာရှယ် ဟာလန် (အမေရိကန် ရှေ့နေ၊ တရာသူကြီးနှင့် နိုင်ငံရေးသမားနှင့် ကင်တပ်ကီပြည်နယ် ရှေ့နေချုပ် (၁၉၁၁ ခုနှစ် သေဆုံး)
၁၈၄၃ – ဟင်နရီ ဖော့ဒ် (စကော့ သမားတော်နှင့် သာသနာပြု၊ လက်ဗွေ့နှိပ်ခြင်းကို အဆင့်မြှင့်တင်ခဲ့သူ (၁၉၃၀ ခုနှစ် သေဆုံး))
၁၈၄၄ – ဂျွန် ဂျိမ်း တော်ဖီ (အမေရိကန် စစ်ဗိုလ်၊ Medal of Honor အပ်နှင်းခံရသူ (၁၉၁၁ ခုနှစ် သေဆုံး))
၁၈၆၉ – ရစ်ချက် ဝန်းချ် (ဂျာမန် ဝေါဟာရပညာရှင် (၁၉၁၅ ခုနှဏ် သေဆုံး))
၁၈၇၃ – အယ်လသ်န, အလီစတာ (ဘာဆာရေးဘီးယား နိုင်ငံရေးသမား (၁၉၅၅ ခုနှစ် သေဆုံး))
၁၈၇၄ – ယူရီ နိုကိုလာ့ဗစ်ချ် ဗိုရာနော့ဗ် (ရုရှား ရုက္ခဗေဒပညာရှင် (၁၉၃၁ ခုနှစ် သေဆုံး))
၁၈၇၈ – ဂျွန် မေစ်ဖီးဒ် (အင်္ဂလိပ် စာရေးဆရာနှင့် ကဗျာဆရာ (၁၉၆၇ ခုနှစ် သေဆုံး))
၁၈၇၉ – မက် အမ်မာရစ် (အမေရိကန် ပြေးခုန်ပစ်နှင့် ကျွမ်းဘားကစားသမား (၁၉၅၆ ခုနှစ် သေဆုံး))
၁၈၈၂ – နီကိုလိုင်း ဘီဗို (မော်ဒိုဗာ စီးပွားရေးသမားနှင့် နိုင်ငံရေးသမား၊ Mayor of Chișinău (၁၉၄၀ ခုနှစ် သေဆုံး))
၁၈၈၇ – ကလိုက် ဘရွတ် (အင်္ဂလိပ် သရုပ်ဆောင် (၁၉၇၄ ခုနှစ် သေဆုံး))
၁၈၈၉ – ဂျိမ်းစ် ဒေါ်ဟာသီ (အမေရိကန် စာရေးဆရာ၊ သရုပ်ပြနှင့် ပန်းချီဆရာ (၁၉၇၄ ခုနှစ် သေဆုံး))
၁၈၈၉ – ချားလ်စ် ကေး အော့ဒန် (အင်္ဂလိပ် ဘာသာဗေဒပညာရှင်နှင့် ဒဿနပညာရှင် (၁၉၅၇ ခုနှစ် သေဆုံး))
၁၈၉၀ – ဖရန့် မော်ဂန် (အမေရိကန် သရုပ်ဆောင် (၁၉၄၉ ခုနှစ် သေဆုံး))
၁၈၉၂ – ဧမန်နျူလ ခန်း (အာဖဂနစ္စတန်ဘုရင့်နိုင်ငံ၏ နိုင်ငံဥသျှောင် (၁၉၆၀ ခုနှစ် သေဆုံး))
၁၈၉၉ – အက်ဒွမ် ချားလ်း တစ်ချ်မက်ရှ် (အင်္ဂလိပ် သင်္ချာပညာရှင် (၁၉၆၃ ခုနှစ် သေဆုံး))
၁၉၂၆ – မာရီလင်မွန်ရိုး၊ အမေရိကန် မင်းသမီး၊ အဆိုတော် နှင့် မော်ဒယ်လ် တစ်ဦး ဖြစ်သည် (သေဆုံး ၁၉၆၂)။
၁၉၅ ဘီစီ – ဟန်ဧကရာဇ် ကောင်းဇူး (၂၅၆ ဘီစီ မွေးဖွား)
၁၉၃ – ဒီဒီရပ်စ် ဂျူလီယန်နပ် (ရောမဧကရာဇ်) (၁၃၃ ခုနှစ်ဖွား)
၃၅၂ – ရန်မင်း ("ကောင်းကင်ဘုရင်" (တေဝမ်) ၁၆ နိုင်ငံကာလအတွင်း)
၆၅၄ – ပီးရပ် (ကွန်စတင်တီနိုပယ်၏ ဘုန်းတော်ကြီး)
၈၂၉ – လီထုန်းကျယ် (တန်မင်းဆက်၏ စစ်ဗိုလ်ချုပ်)
၈၄၇ – ဧကရီ ရှောင် (တန်မင်းဆက် ဧကရီ)
၈၉၆ – သီယိုဒီုဆီးယပ် ရိုမန်နပ်စ် (အန်တီရော့ချ်မြို့၏ ဆီးရီးယား အော်သိုဒေါ့ခ် ဘုန်းတော်ကြီး)
၉၃၂ – သီယပ်မာ (ဆက်ဆွန်နီ နယ်စား)
၁၁၄၆ – အန်ဂျူးမင်းသမီး အာမန်ဂါ့ (ဘရစ်တနီနယ်၏ ရင်ခွင်ပိုက်နယ်စား (၁၀၆၈ ခုနှစ်ဖွား))
၁၁၈၆ – မီနာမာတို နို ယူကီယဲ့ (ဂျပန်လူမျိုး စစ်ဘုရင်)
၁၂၂၀ – ဟင်နရီ ဒီ ဘိုဟန် (ပထမမြောက် ဟီးယားဖို့ဒ် အမတ်(၁၁၇၆ မွေးဖွား))
၁၃၁၀ – မာဂူရီတီ ပိုရက် (ပြစ်သစ်လူမျိုး ဘာသာရေးသမား)
၁၃၅၄ – ကီတဘာတာကီ ချီကာဖူဆာ (၁၂၉၃ ခုနှစ်ဖွားး)
၁၄၃၄ – ပိုလန်ဘုရင် ဒုတိယမြောက် ဝါဒီစလပ်
၁၅၇၁ – ဂျွန် စတိုရီ (အင်္ဂလိပ် သာသန့အာဇာနည်(၁၅၀၄ ခုနှစ်ဖွား))
၁၆၁၆ – တိုကူဂါဝါ အီယဲယာ့ဆု (ဂျပန်ရှိုးဂန်း (၁၅၄၃ ခုနှစ်ဖွားး)
၁၆၂၅ – အော်နာရီ ဒူအူဖဲ (ပြင်သစ် စာရေးဆရာနှင့် ကဗျာဆရာ(၁၅၆၈ ခုနှစ်ဖွားး))
၁၆၃၉ – မာချီယာ ဖရန့် (ဂျာမန် တေးပြုစာဆို (၁၅၇၉ ခုနှစ်ဖွားး))
၁၆၆၀ – မေရီ ဒိုင်ယာ (အင်္ဂလိပ်-အမေရိကန် အာဇာနည်(၁၆၁၁ ခုနှစ်ဖွားး))
၁၆၆၂ – ယုန်လီ (တရုတ်ဧကရာဇ် (၁၆၂၃ ခုနှစ်ဖွား)
၁၆၈၁ – ကော်နယ်လစ် ရှတလေဗန် (ဒတ်ချ် နေ့စဉ်လူမှုဘဝ သရုပ်ဖော်ပန်းချီဆရာ (၁၆၀၇ ခုနှစ်ဖွား))
၁၇၁၀ – ဒေးဗစ် မစ်ချဲ (စကော့လူမျိုး ရေတပ်ဗိုလ်ချုပ်နှင့် နိုင်ငံရေးသမား (၁၆၄၂ ခုနှစ်ဖွား))
၁၇၄၀ – ဆမ်မြူယယ် ဝရန်ဖဲလ် (ဆွစ်လူမျိုး ဘာသာရေးပညာရှင် (၁၆၅၇ ခုနှစ်ဖွား))
၁၇၆၉ – အက်ဒဝပ် ဟိုးလီးယု (အမေရိကန် သင်းအုပ်ဆရာနှင့် ပညာရှင် (၁၆၈၉ ခုနှစ်ဖွား))
၁၇၇၃ – ဝေါ့ရက်ဒ် ဝေါ့တီမိတ် (တောင်အာဖရိက ‌ကျေးလက်သူရဲကောင်း (၁၇၀၈ ခုနှစ်ဖွား))
၁၇၉၅ – ပဲရီ ဂျိူးဆက် ဒီဆော့ (ပြင်သစ်ဘခန္ဓာဗေဒပညာရှင်နှင့် ခွဲစိတ်ဆရာဝန် (၁၇၄၄ ခုနှစ်ဖွား))
၁၈၁၅ – လူဝစ် အလက်ဇန္ဒား ဘာသီယာ (ပြင်သစ်လူမျိုး ဗိုလ်ချုပ်နှင့် နိုင်ငံရေးသမား၊ ပြင်သစ် စစ်ဘက်ဆိုင်ရာ ဝန်ကြီး‌ (၁၇၅၃ ခုနှစ်ဖွား))
၁၈၂၃ – လူဝစ် နီကိုလပ် ဒီဗော့ (ပြင်သစ် ဗိုလ်ချုပ်နှင့် နိုင်ငံရေးသမား၊ ပြင်သစ် စစ်ဘက်ဆိုင်ရာ ဝန်ကြီး‌ (၁၇၇၀ ခုနှစ်ဖွား))
၁၈၂၆ – ဂျင်း ဖရက်ဒရစ် အိုဘာလင် (ပြင်သစ် သင်းအုပ်ဆရာနှင့် ပရဟိတသမား(၁၇၄၀ ခုနှစ်ဖွား))
၁၈၃၀ – ဆွာမိနာရယန် (အိန္ဒိယ ဘာသာရေးခေါင်းဆောင် (၁၇၈၁ ခုနှစ်ဖွား))
၁၈၃၃ – အိုလီဗာ ဝှိုးကော့ (အမေရိကန် ရှေ့နေနှင့် နိုင်ငံရေးသမား၊ ဒုတိယမြောက် အမေရိကန်ပြည်ထောင်စု ဘဏ္ဍာရေးအတွင်းရေးမှူး၊ ၂၄ ယောက်မြောက် ကွန်နက်တီကတ်ပြည်နယ်အုပ်ချုပ်ရေးမှူး (၁၇၆၀ ခုနှစ်ဖွား))
၁၈၄၁ – ဒေးဗစ် ဝီကီ (စကော့ပန်းချီဆရာနှင့် ပညာရှင် (၁၇၈၅ ခုနှစ်ဖွား))
၁၈၄၆ – ပုပ် ဂရီဂိုရီ ၁၄ (၁၇၆၅ ခုနှစ်ဖွား)
၁၈၆၁ – ဂျွန် ကွင်စီ မား (အမေရိကန် ဗိုလ်ကြီး (၁၈၂၅ ခုနှစ်ဖွား))
၁၈၆၄ – ဟုန်ရှုဝှမ် (တရုတ် သူပုန်၊ တိုင်ပင်းပုန်ကန်မှုအား ဦးဆောင်ခဲ့သူ (၁၈၁၂ ခုနှစ်ဖွား))
၁၈၆၈ – ဂျိမ်းစ် ဘွတ်ခ်နန် (အမေရိကန် ရှေ့နေ၊ ၁၅ ယောက်မြောက် အမေရိကန် သမ္မတ (၁၇၉၁ ခုနှစ်ဖွား))
၁၈၇၂ – ဂျိမ်း ဂေါ်ဒွန် ဘန်းနက် (အမေရိကန် ထုတ်ဝေသူ၊ New York Herald တည်ထောင်သူ (၁၇၉၅ ခုနှစ်ဖွား))
၁၈၇၃ – ဂျိုးဆက် ဟောင်း (ကနေဒါ သတင်းစာဆရာနှင့် နိုင်ငံရေးသမား၊ ပဉ္စမမြောက် နိုဗာစကိုးရှားပြည်နယ် ဝန်ကြီးချုပ် (၁၈၀၄ ခုနှစ်ဖွား))
၁၈၇၆ – ဟရီစတို ဘူတပ် (ဘူဂေးရီးယား ကဗျာဆရာနှင့် သတင်းစာဆရာ (၁၈၄၈ ခုနှစ်ဖွား))
၁၈၇၉ – နပိုလီယံမင်းသား (၁၈၅၆ ခုနှစ်ဖွား)
၁၉၀၈ – အယ်လန် ဘတ္တလာ တာကတ် (အမေရိကန် ပန်းချီဆရာ (၁၈၆၇ ခုနှစ်ဖွား))
၁၉၂၅ – သောမတ် ရိုင်လီ မာရှယ် (အမေရိကန် နိုင်ငံရေးသမား၊ ၂၈ ယောက်မြောက် အမေရိကန် ဒုသမ္မတ (၁၈၅၄ ခုနှစ်ဖွား)
၁၉၂၇ – လစ်ဇီ ဘော်တန် (အမေရိကန် လူသတ်သမားအဖြစ် စွပ်စွဲခံရသူ (၁၈၆၀ ခုနှစ်ဖွား))
၁၉၂၇ – ဂျွန် ဘဂ္ဂနယ် ဘယ်ရီ (အိုင်းရစ် သမိုင်းပညာရှင်၊ အတွေး‌အခေါ်ပညာရှင်နှင့် ပညာရှင် (၁၈၆၁ ခုနှစ်ဖွား))
၁၉၃၄ – ဆာ အဲဖရက် ရောလင်ဆန် (တတိယမြောက် ဘာရွန်နက်၊ အင်္ဂလိပ် ဗိုလ်မှူးကြီးနှင့် ပိုလိုကစားသမား (၁၈၆၇ ခုနှစ်ဖွား)
၁၉၃၅ – အာသာ အာ့ဇ် ဗွန် စတာဆင်ဘာ့ခ် (ရိုမေးနီးယား-ဟန်ဂေရီ ဗိုလ်ချုပ်(၁၈၅၇ ခုနှစ်ဖွား)
၁၉၃၈ – အိုဒင် ဗွန် ဟော်ဗတ် (ခရိုအေးရှား-ပြင်သစ် စာရေးဆရာနှင့် ပြဇာတ်ရေးဆရာ (၁၉၀၁ ခုနှစ်ဖွား))
၁၉၄၁ – ဟန်စ် ဘာဂါ (ဂျာမန် ဦးနှောက်နှင့်အာရုံကြောပါရဂူနှင့် ပညာရှင် (၁၈၇၃ ခုနှစ်ဖွား))
၁၉၄၁ – ဟျူး ဝါးပိုး (နယူးဇီလန်-အင်္ဂလိပ် စာရေးဆရာ (၁၈၈၄ ခုနှစ်ဖွား))
၁၉၄၃ – လက်စလီ ဟောဝပ် (အင်္ဂလိပ် သရုပ်ဆောင်၊ ဒါရိုက်တာနှင့် ထုတ်လုပ်သူ (၁၈၉၃ ခုနှစ်ဖွား))
၁၉၄၃ – ဝဲဖရစ်ဒ် အစ္စရေး (အင်္ဂလိပ်-ဂျာမန် စီးပွားရေးသမားနှင့် ပရဟိတသမား(၁၈၉၉ ခုနှစ်ဖွား))
၁၉၄၆ – အီရွန် အန်တိုနီစကု (ရိုမေးနီးယား မာရှယ်နှင့် နိုင်ငံရေးသမား၊ ၄၃ ယောက်မြောက် ရိုမေးနီးယား ဝန်ကြီးချုပ် (၁၈၈၂ ခုနှစ်ဖွား))
၁၉၄၈ – အဲလက်စ် ဂတ် (ရုရှား-အမေရိကန် ကာတွန်းဆရာ (၁၉၀၀ ခုနှစ်ဖွား))
၁၉၅၂ – ဂျွန် ဒူးဝှီး (အမေရိကန် စိတ်ပညာရှင်နှင့် ဒဿနပညာရှင် (၁၈၅၉ ခုနှစ်ဖွား))
၁၉၅၃ – အီမန်နျူရယ် ဗီဒိုဗစ် (ခရိုအေးရှား ပန်းချီဆရာနှင့် သရုပ်ပြဆရာ (၁၈၇၀ ခုနှစ်ဖွား))
၁၉၅၄ – မာတင် အန်ဒါဆန် နက်ဆို (ဒိန်းမတ်-ဂျာမန် သတင်းစာဆရာနှင့် စာရေးဆရာ (၁၈၆၉ ခုနှစ်ဖွား)
၁၉၆၀ – လက်စတာ ပတ်ထရစ် (ကနေဒါ ရေခဲပြင်ဟော်ကီကစားသမားနှင့် နည်းပြ (၁၈၈၃ ခုနှစ်ဖွား))
၁၉၆၀ – ပေါလာ ဟစ်တလာ (အဒေါ့ဖ် ဟစ်တလာ၏ ညီမ (၁၈၉၆ ခုနှစ်ဖွား))
၁၉၆၂ – အဒေါ့ဖ် အိုက်ခမန်း (Nazi SS-Obersturmbannführer (၁၉၀၆ ခုနှစ်ဖွား)
၁၉၆၃ – ဝေါ်တာ လီး (ဩစတေးလျ နိုင်ငံရေးသမား၊ ၂၄ ယောက်မြောက် တက်စ်မေးနီးယား ဝန်ကြီးချုပ် (၁၈၇၄ ခုနှစ်ဖွား))
၁၉၆၅ – ကာလီး လမ်ဘူး (အမေရိကန် ဘောလုံးသမားနှင့် နည်းပြ၊ Green Bay Packers အသင်းတည်ထောင်သူ) (၁၈၉၈ ခုနှစ်ဖွား))
၁၉၆၆ – ပါပါ ဂျက် လိန်း (အမေရိကန် ဒရမ်သမားနှင့် တီးဝိုင်းခေါင်းဆောင် (၁၈၇၃ ခုနှစ်ဖွား))
၁၉၆၈ – ဟယ်လင် ကဲလား (အမေရိကန် ‌စာရေးဆရာနှင့် တက်ကြွလှုပ်ရှား (၁၈၈၀ ခုနှစ်ဖွား))
၁၉၆၈ – အန်ဒရဲ လူရန်ဒူ (ကနေဒါ ပြဇာတ်ရေးဆရာ၊ သတင်းစာဆရာနှင့် နိုင်ငံရေးသမား (၁၉၁၂ ခုနှစ်ဖွား))
၁၉၆၉ – အီဗာ ဘာလန်ဂရက် (နော်ဝေး စကိတ်စီးသမား (၁၉၀၄ ခုနှစ်ဖွား))
၁၉၇၁ – ရိုင်ဟိုး နီးဗာ (အမေရိကန် ဘာသာရေးကျွမ်းကျင်သူနှင့် ပညာရှင် (၁၈၉၂ ခုနှစ်ဖွား))
၁၉၇၉ – ဝါနာ ဖို့စ်မန်း (ဂျာမန် သမားတော်နှင့် ပညာရှင်၊ နိုဘယ်ဆုရှင် (၁၉၀၄ ခုနှစ်ဖွား))
၁၉၈၀ – အာသာ နေးလ်ဆန် (အမေရိကန် စီးပွားရေးသမား၊ ACNielsen company တည်ထောင်သူ (၁၈၉၇ ခုနှစ်ဖွား))
၁၉၈၁ – ကားလ် ဗင်ဆင် (အမေရိကန်ရှေ့နေနှင့် နိုင်ငံရေးသမား (၁၈၈၃ ခုနှစ်ဖွား))
၁၉၈၃ – ချားလ်မင်းသား (ဖလန်ဒါမြို့စား (၁၉၀၃ ခုနှစ်ဖွား))
၁၉၈၅ – ရစ်ချက် ဂရင်း (အင်္ဂလိပ် ရုပ်ရှင်သရုပ်ဆောင်နှင့် စစ်သား (၁၉၁၈ ခုနှစ်ဖွား))
၁၉၈၆ – ဂျိုး ဂါတနာ (‌ဩစတီးယား ပြိုင်ကားမောင်းသမား (၁၉၅၈ ခုနှစ်ဖွား))
၁၉၈၇ – ရာရှိ ကရာမီ (လက်ဘနွန် ရှေ့နေနှင့် နိုင်ငံရေးသမား၊ ၃၂ ယောက်မြောက် လက်ဘနွန် ဝန်ကြီးချုပ် (၁၉၂၁ ခုနှစ်ဖွား))
၁၉၈၈ – ဟားဘတ် ဖိုင်ဂယ် (ဗီယင်နာစက်ဝိုင်းမှ ဩစတီးယား ဒဿနပညာရှင် (၁၉၀၂ ခုနှစ်ဖွား))
၁၉၈၉ – အော်ရီလီယို လမ်ပရက်ဒီ (အီတလီ အင်ဂျင်နီယာ၊ Ferrari Lampredi engine ဒီဇိုင်းဆွဲသူ (၁၉၁၇ ခုနှစ်ဖွား))
၁၉၉၁ – ဒေးဗစ် ရပ်ဖင် (အမေရိကန် အဆိုတော်-သီချင်းရေးဆရာ (၁၉၄၁ ခုနှစ်ဖွား))
၁၉၉၆ – နီလန် ဆန်ချီဗ ရက်ဒီ (အန္ဒိယ နိုင်ငံရေးသမား၊ ၆ ယောက်မြောက် အိန္ဒိယနိုင်ငံ၏ သမ္မတ (၁၉၁၃ ခုနှစ်ဖွား))
၁၉၉၉ – ခရစ္စတိုဖာ ကော့ကာရဲလ် (အင်္ဂလိပ် အင်ဂျင်နီယာ၊ ကုန်းရေနှစ်သွယ်သွား ‌ရှပ်ပြေးယာဉ် တီထွင်သူ (၁၉၁၀ ခုနှစ်ဖွား))
၂၀၀၀ – တီတို ပွန်တေး (အမေရိကန် ဒရမ်သမား၊ တေးရေးဆရာနှင့် ထုတ်ဝေသူ (၁၉၂၃ ခုနှစ်ဖွား))
၂၀၀၁ – ဟန် ကတ်ချမ် (အမေရိကန် ကာတွန်းဆရာ၊ Dennis the Menace ကာတွန်း ဖန်တီးခဲ့သူ (၁၉၂၀ ခုနှစ်ဖွား))
၂၀၀၁ – ‌နီပေါ တော်ဝင်မိသားစု သတ်ဖြတ်ခံရခြင်းမှ သေဆုံးခဲ့သူများ
ဝိရန်ဒြာ (ဘုရင်) (၁၉၄၅ ခုနှစ်ဖွား)
အက်ရှ်ဝါယ (မိဖုရား_ (၁၉၄၉ ခုနှစ်ဖွား)
ဒီအင်ဒြာ (၁၉၅၀ ခုနှစ်ဖွား)
နီရာဂျန် (၁၉၇၈ ခုနှစ်ဖွား)
ရှရုတီ (၁၉၇၆ ခုနှစ်ဖွား)
၂၀၀၂ – ဟန်စီ ခရိုညယ် (တောင်အာဖရိက ခရစ်ကတ်ကစားသမား (၁၉၆၉ ခုနှစ်ဖွား))
၂၀၀၄ – ဝီလျံ မန်ချက်စတာ (အမေရိကန် သမိုင်းပညာရှင်နှင့် စာရေးဆရာ (၁၉၂၂ ခုနှစ်ဖွား))
၂၀၀၅ – ဟီဒါ ခရော့စ်ဘီ စတန်းဒစ်ရှ် (အမေရိကန် သမားတော် (၁၉၀၂ ခုနှစ်ဖွား))
၂၀၀၅ – ‌‌ဂျော့ မိုက်ကန် (အမေရိကန် ဘက်စကတ်ဘော ကစားသမားနှင့် နည်းပြ (၁၉၂၄ ခုနှစ်ဖွား))
၂၀၀၆ – ရိုစီရို ဂျူရာဒို (စပိန် အဆိုတော်နှင့် ရုပ်ရှင်မင်းသမီး (၁၉၄၄ ခုနှစ်ဖွား))
၂၀၀၇ – တိုနီ သွန်မဆင် (အမေရိကန် အဆိုတော်နှင့် (Hi-Five) အဖွဲ့ သီချင်း‌ရေးဆရာ (၁၉၇၅ ခုနှစ်ဖွား) (၁၉၇၅ ခုနှစ်ဖွား))
၂၀၀၈ – တိုမီ လပစ် (အစ္စရေး သတင်းစာဆရာနှင့် နိုင်ငံရေးသမား၊ ၁၇ ယောက်မြောက် အစ္စရေး တရားရေးရာ ဝန်ကြီး (၁၉၃၁ ခုနှစ်ဖွား))
၂၀၀၈ – ယီ စိန့် လူရန် (ပြင်သစ်ဒီဇိုင်းနာ၊ Saint Laurent Paris တည်ထေင်သူ (၁၉၃၆ ခုနှစ်ဖွား))
၂၀၀၉ – ဘော့ ခရစ္စတင်း (အမေရိကန် ပြိုင်ကားမောင်းသမား (၁၉၂၄ ခုနှစ်ဖွား))
၂၀၀၉ – ဗင်းဆင့် အို'ဘရိုင်ယန် (အိုင်းရစ် မြင်းလေ့ကျင့်ရေးဆရာ (၁၉၁၇ ခုနှစ်ဖွား))
၂၀၁၀ – ခါဇူအို အိုနို (ဂျပန် အကသမား (၁၉၀၆ ခုနှစ်ဖွား))
၂၀၁၀ – အန်ဒရဲရီ ဗာ့ဇ်ညဲဇန်စကီး (ရုရှား ကဗျာဆရာ (၁၉၃၃ ခုနှစ်ဖွား))
၂၀၁၁ – ဟာလေ ဆဟာဘီ (အီရန် လူသားချင်းစာနာထောက်ထားမှုဆိုင်ရာ တက်ကြွလှုပ်ရှားသူ (၁၉၅၇ ခုနှစ်ဖွား))
၂၀၁၂ – ဖားရွတ် ဘေး (အမေရိကန် ဆက်ဆိုဖုန်းမှုတ်သူနှင့် တေးရေးဆရာ (၁၉၄၂ ခုနှစ်ဖွား))
၂၀၁၂ – ပက်ထရစ် ဖော်ခ်နာ (အိုင်ရစ် ကျောင်းဆရာနှင့် နိုင်ငံရေးသမား၊ ၁၉ ယောက်မြောက် အိုင်းရစ် ကာကွယ်ရေးဝန်ကြီး (၁၉၁၈ ခုနှစ်ဖွား))
၂၀၁၂ – မီလန် ဂါလာ (ဆလိုဗက် နိုင်ငံရေးသမား (၁၉၅၃ ခုနှစ်ဖွား))
၂၀၁၃ – ဂျိမ်းစ် ကဲလဲဟာ (ကနေဒါ ရှေ့နေနှင့် နိုင်ငံရေးသမား၊ ၃၃ ယောက်မြောက် ကနေဒါ တရားရုံး ရှေ့နေချုပ် (၁၉၃၀ ခုနှစ်ဖွား))
၂၀၁၄ – အန်း ဘရက်ဖို့ဒ် ဒေးဗစ် (အမေရိကန် ရုပ်ရှင်မင်းသမီး (၁၉၂၆ ခုနှစ်ဖွား))
၂၀၁၄ – ဗယ်လန်တင်း မန်ကင် (ယူကရိန်း သင်္ဘောသား (၁၉၃၈ ခုနှစ်ဖွား))
၂၀၁၅ – ချားလ်စ် ကနေဒီ (စကော့ သတင်းစာဆရာနှင့် နိုင်ငံရေးသမား (၁၉၅၉ ခုနှစ်ဖွား))
၂၀၁၅ – ဂျုန် ကင်နာ (ဩစတေးလျ ကျောင်းဆရာနှင့် နိုင်ငံရေးသမား၊ ၄၂ ယောက်မြောက် ဝိတိုရိယပြည်နယ်ဝန်ကြီးချုပ် (၁၉၃၈ ခုနှစ်ဖွား))
၂၀၁၅ – နီကိုလပ်စ် လစ်ပါပူး (ဒိုမေနီကန် ရှေ့နေနှင့် နိုင်ငံရေးသမား၊ ၆ ယောက်မြောက် ဒိုမေနီကန် သမ္မတ (၁၉၃၄ ခုနှစ်ဖွား))
၂၀၁၅ – ဂျက်ကော့ ပဲရီဇူး (‌ကနေဒါ စီးပွားရေးပညာရှင်နှင့် နိုင်ငံရေးသမား၊ ၂၆ ယောက်မြောက် ကွီးဘက်ပြည်နယ် ဝန်ကြီးချုပ် (၁၉၃၀ ခုနှစ်ဖွား))
၂၀၁၅ – ဂျင်း ရစ်ချီ (အမေရိကန် အဆိုတော်နှင့် သီချင်းရေးဆရာ (၁၉၂၂ ခုနှစ်ဖွား))
၂၀၁၈ – ဆီနန် ဆာကစ် (ဆားဘီးယား အဆိုတော် (၁၉၅၆ ခုနှစ်ဖွား))
၂၀၁၉ – အန်နီ ယူဒိုယိုနို (အင်ဒိုနီးရှား နိုင်ငံရေးသမား၊ ၆ ယောက်မြောက် သမ္မတကတော် (၁၉၅၂ ခုနှစ်ဖွား))
ကလေးသူငယ်များနေ့ (နိုင်ငံတကာ)နှင့် ၎င်းတို့နှင့် ဆက်နွယ်သောနေ့များ-
ကလေးသူငယ်အခွင့်အရေး ကာကွယ်ခြင်းနေ့ (အာမေးနီးယား)
အမေနှင့် ကလေးသူငယ်များနေ့ (မွန်ဂိုလီးယား)
Justin Martyr (ရိုမန် ကက်သလစ်၊ အရှေ့ပိုင်း အော်သိုဒေါ့၊ အန်ဂလီကန်၊ လူသာရန်)
ဇွန်လ၏ ပထမဆုံးသော တနင်္လာနေ့တွင် ကျင်းပသော ဇွန်လအားလပ်ရက်၏ အစောဆုံးနေ့သည် ဤနေ့တွင် ကျရောက်နိုင်ပြီး နောက်ကျဆုံးသောနေ့သည် ဇွန်လ ၇ ရက်နေ့ဖြစ်သည်။ (အိုင်ယာလန်နိုင်ငံ)
ဇွန်လ၏ ပထမဆုံးသော သောကြာနေ့တွင် ကျင်းပသော အလုပ်သမားနေ့၏ အစောဆုံးနေ့သည် ဤနေ့တွင် ကျရောက်နိုင်ပြီး နောက်ကျဆုံးသောနေ့သည် ဇွန်လ ၇ ရက်နေ့ဖြစ်သည်။ (ဘဟားမားနိုင်ငံ)
ဇွန်လ၏ ပထမဆုံးသော တနင်္ဂနွေနေ့တွင် ကျင်းပသော ကမ္ဘာ့ဆရာများနေ့၏ အစောဆုံးနေ့သည် ဤနေ့တွင် ကျရောက်နိုင်ပြီး နောက်ကျဆုံးသောနေ့သည် ဇွန်လ ၇ ရက်နေ့ဖြစ်သည်။ (ဟန်ဂေရီနိုင်ငံ)
ဇွန်လ၏ ပထမဆုံးသော တနင်္လာနေ့တွင် ကျင်းပသော ဘုရင်မမွေးနေ့၏ အစောဆုံးနေ့သည် ဤနေ့တွင် ကျရောက်နိုင်ပြီး နောက်ကျဆုံးသောနေ့သည် ဇွန်လ ၇ ရက်နေ့ဖြစ်သည်။ (နယူးဇီလန်နိုင်ငံ၊ ဖီဂျီနိုင်ငံ၊ ကွက်ကျွန်းစု)
ဇွန်လ၏ ပထမဆုံးသော တနင်္ဂနွေနေ့တွင် ကျင်းပသော သင်္ဘောသားနေ့၏ အစောဆုံးနေ့သည် ဤနေ့တွင် ကျရောက်နိုင်ပြီး နောက်ကျဆုံးသောနေ့သည် ဇွန်လ ၇ ရက်နေ့ဖြစ်သည်။ (အိုက်စလန်နိုင်ငံ)
ဇွန်လ၏ ပထမဆုံးသော တနင်္ဂနွေနေ့တွင် ကျင်းပသော အနောက်ဩစတြေးလျနေ့ ၏ အစောဆုံးနေ့သည် ဤနေ့တွင် ကျရောက်နိုင်ပြီး နောက်ကျဆုံးသောနေ့သည် ဇွန်လ ၇ ရက်နေ့ဖြစ်သည်။ (အနောက်ဩစတြေးလျပြည်နယ်)
လွတ်လပ်ရေးနေ့ - ၁၉၆၂ ခုနှစ်တွင် နယူးဇီလန်နိုင်ငံမှ လွတ်လပ်ရေးရခဲ့သော အထိမ်းအမှတ်အဖြစ် ကျင်းပသည်။ (ဆမိုးအားနိုင်ငံ)
အမျိုးသား ရေကြောင်းနေ့ (မက္ကဆီကိုနိုင်ငံ)
အမျိုးသား သစ်ပင်စိုက်ပျိုးရေးနေ့ (ကမ္ဘောဒီးယားနိုင်ငံ)
ကောက်ရိတ်သိမ်းပွဲတော် အစ (ဩဂုတ်လ ပထမဆုံးသော တနင်္လာနေ့မတိုင်မချင်းကျင်းပကြသည်။) (ဘာဘေးဒိုးစ်နိုင်ငံ)
ကမ္ဘာ့ နွားနို့နေ့ (နိုင်ငံတကာ)
↑ Jones၊ David R. (1978)။ The Military-Naval Encyclopedia of Russia and the Soviet Union။ Academic International Press။ p. 26။ ISBN 978-0-87569-028-5။
↑ George Burnett, Exchequer Rolls of Scotland: 1488–1496, vol 10 (Edinburgh, 1887), p. 487 "Et per liberacionem factam Fratri Johanni Cor per preceptum compotorum rotulatoris, ut asserit, de mandato domini regis ad faciendum aquavite, infra hoc compotum viij bolle brasii."
↑ Robert Furley (1874)။ A History of the Weald of Kent, with an Outline of the Early History of the Country, by Robert Furley, Also,aSketch of the Physical Features of the District by Henry B. Mackeson: In Two Volumes။ H. Igglesden။ p. 545။
↑ Parke-Bernet Galleries (1950)။ Sales။ Parke-Bernet Galleries။ p. 12။
↑ Vihtori Karpio (1938)။ Raittiuden ystävät 1883–1933 (ဖင်လန်ဘာသာစကားဖြင့်)။ Jyväskylä: Gummerus။ p. 417။
↑ Field, Robert (Fall 2008). "Revisiting the 1950 Great Smoke Pall". Canadian Smoke Newsletter: 13–16. Archived 18 February 2013 at the Wayback Machine.
↑ Green၊ David B.။ "This Day in Jewish History 1974: The Heimlich Maneuver Is Invented, Eaters Applaud"၊ Haaretz၊ 2016-06-01။
↑ Carlin၊ John။ "South Africa returns to the Commonwealth fold"၊ The Independent၊ 1 June 1994။
↑ "Endeavour completes final mission; one flight left for NASA"၊ CNN၊ June 1, 2011။
↑ Alison Weir (5 January 2008)။ Eleanor of Aquitaine: By the Wrath of God, Queen of England။ Vintage။ p. 82။ ISBN 978-0-09-952355-0။
↑ C.B. Joseph; Lord Mowbray; Segrave; =Stourton။ The History of the Noble House of Stourton, of Stourton, in the County of Wilts။ Рипол Классик။ p. 973။ ISBN 978-5-88060-380-0။
↑ Cokayne၊ George Edward (1916)။ The Complete Peerage, edited by the Honourable Vicary Gibbs။ IV။ London: St. Catherine Press။ pp. 102–5။
↑ The Life of Goethe။ Ardent Media။ 1864။ p. 444။
↑ Leah Eudora Dunford Widtsoe (1930)။ The Life Story of Brigham Young။ Macmillan။ p. xxii။ ISBN 9780836958867။
↑ BBC Music Magazine။ BBC magazines။ 1997။ p. 44။
↑ The Encyclopaedia Britannica: A Dictionary of Arts, Sciences, Literature and General Information။ Encyclopaedia Britannica Company။ 1911။ p. 372။
↑ Basil Wilson Duke (1906)။ Morgan's Cavalry။ Neale Publishing Company။ p. 14။
↑ Glanville Downey (1961)။ A history of Antioch in Syria: from Seleucus to the Arab conquest။ Princeton University Press။ p. 236။ ISBN 9780691035208။
↑ The Cambridge Medieval History Series volumes 1-5။ Plantagenet Publishing။ p. 675။
↑ Charles Octavius S. Morgan (1854)။ Notes on the architecture and history of Caldicot castle, Monmouthshire, by O. Morgan and T. Wakeman။ p. 15။
↑ Warner၊ Charles Dudley (2008)။ A Library of the World's Best Literature - Ancient and Modern - Vol.XLIII (Forty-Five Volumes); Dictionary of Authors (K-Z) (အင်္ဂလိပ်ဘာသာစကားဖြင့်)။ Cosimo, Inc.။ p. 539။ ISBN 978-1-60520-251-8။
↑ Times၊ Special to The New York။ "Thomas R. Marshall, War Vice President, Dies, Bible in hand" (in en-US)၊ The New York Times၊ 1925-06-02။
↑ Charles Kennedy obituary (in en) (2015-06-02)။
↑ "Former First Lady Ani Yudhoyono Passes Away After Long Battle With Cancer"၊ Jakarta Globe၊ 1 June 2019။
↑ Suhartono၊ Harry။ "Kristiani Yudhoyono, Indonesia's Former First Lady, Dies at 67"၊ Bloomberg News၊ 1 June 2019။
↑ International Days (in en) (6 January 2015)။
↑ The Europa World Year: Kazakhstan - Zimbabwe (အင်္ဂလိပ်ဘာသာစကားဖြင့်)။ Taylor & Francis။ 29 July 2004။ p. 3304။ ISBN 978-1-85743-255-8။
"https://my.wikipedia.org/w/index.php?title=၁_ဇွန်&oldid=658096" မှ ရယူရန်
၅ ဇွန် ၂၀၂၁၊ ၁၆:၁၇ အချိန်တွင် နောက်ဆုံး တည်းဖြတ်ခဲ့သည်။
ဤစာမျက်နှာကို ၅ ဇွန် ၂၀၂၁၊ ၁၆:၁၇ အချိန်တွင် နောက်ဆုံး ပြင်ဆင်ခဲ့သည်။